कस्तो अच्चम ! कुकुर, विरालो लगाएतका घरपालुवा जनावर पा’ल्दा पनि कर ! – Life Nepali
कस्तो अच्चम ! कुकुर, विरालो लगाएतका घरपालुवा जनावर पा’ल्दा पनि कर !
मुगु, १४ फागुन । जुम्लाको एउटा गाउँपालिकाले घरपालुवा जनावरहरुमा पनि कर लगाउने भएको छ । गुठीचौर गाउँपालिकाको यो नीतिमा स्थानीयले विरोध जनाएका छन् । के तपाई कुकुर, विरालो पाल्दै हुनुहुन्छ ? याद गर्नुहोस् सरकारलाई कर बुझाउनु पर्ला ! जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकाले कुकुर र विरालो पाले २५ रुपैयाँका दरले कर बुझाउनुपर्ने नियम बनाएको छ । कुकुर र विरोलोमा मात्र होइन, गाई-भैंसी, हात्ति, घोडा, खच्चडमा पनि कर तिर्नुपर्छ । – news24बाट
गाई-भैंसी उपचार गर्दा २० रुपैयाँ, भेडा–बाख्रा १० रुपैयाँ, हात्ती, घोडा, खच्चड ५० रुपैयाँ , कुखुरा, हाँस १० रुपैयाँ र कुकुर–बिरालो २५ रुपैयाँ कर तिर्नु पर्ने छ । गाउँपालिकाले तयार पारेको यो नीतिमा स्थानीय निकै असन्तुष्ट छन् । गुठीचौर गाउँपालिकाको अर्थसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक ऐन २०७५ मा यसरी वन तथा पाटन क्षेत्रमा पशु चराए कर असुल्ने उल्लेख छ । राजपत्रमा प्रकाशित आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को अर्थसम्बन्धी प्र’स्ताव कार्यान्वयन गर्न स्थानीय कर तथा शुल्क संकलन गर्ने निर्णयअनुसार स्थानीयबाट कर उठाउने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
यता केन्द्रले दिएको अनुदानकै भरमा गाउँपालिका सञ्चालन गर्न नसकिने भएका कारण करको दायरा बढाएको स्थानीयपालिकाको तर्क छ । गाउँपालिकाले भूमिकर र घरबहाल करसँगै व्यवसायिक कर पनि महँगो शुल्क तोकिएको छ । व्यवसायिक करअन्तर्गत खुद्रा पसल र होटल सञ्चालन गर्नेलाई पाँच हजार वार्षिक कर तोकिएको छ । यस्तै कुटानीपिसानी उद्योग सञ्चालन गर्नेलाई दुई हजार कर तोकिएको छ ।
Previous चेक पोस्टमा बरामद गरेको सुन, १६ प्रहरीले नै बाँडेर लगेपछि..
Next आजको बिदेशी विनिमयदर – कुन देशको कति (हेर्नुहोस् तालिकामा)